Dubartoonni oggansa irra jiran jireenya dubatootaa wayi fooyyeessanii? - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni oggansa irra jiran jireenya dubatootaa wayi fooyyeessanii?
15 Onkololeessa 2017
Goodayyaa suuraa Giddu galli Jaavits baaxii bircuqqoo Hilaarii Kilintaniif mallattoo hamaa ta'uun hafe.
"Ani ganaa taayitaa argachuun jijjirama guddaa taasisuu keenya amanu hindandeenye... dubarrii ala sanaa arguuf boodatti ka hafte jiraatte, Anatu pirezidaantii dubartii kan itti aantu ta'a. Garuu kan itti aanuu ammoo tokko keessan.'' Hilaarii Kilintan Adoolessa 2016 wayita filatamtuu Dimokiraati turte kan dubbatteedha.
Dhumarattis, garuu dhugoomsuu dadhabde. Garuu fedhii bakka filannoo alkanii Hilaarii Kilintan omaa hinturree garuu waan tasaatu uumame malee.
Giddu galli Jaaviti Magaalaa Niyoorki keessatti jijjirama olaanaa qabaachuuf ture. Innis seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantii dubartii osoo taa'ee isheef sirrii ture.
Garuu Aaddee Kilintan mo'atamuun adeemsicha duubatti deebiifte. Lakkoofsi dubartoota taayitaaf filatamanii akka addunyaattu waggoota 10 darban keessa guddataa jira.
Wayita ammaa kanattis dubartoota 15 kanneen saddeet ta'an oggantoota biyya saanii ta'uun tajaajilaa jiru, akka xinxala giddu gala qorannoo Peewiitti.
Haa ta'u malees, kana jechuun dubartoonni oggansa irra jiranbiyyoota miseensa mootummoota gamtoomanii 193 keessaa amma illeen dhiibbeentaa 10 gadiidha.
Goodayyaa suuraa Dubarri oggantoota dubartootaatiin waa'ee mataasaanii caalaa akka kaka'umsa argatan qorannoon adda baase.
Oggantoonni kunneen ifatti danqaa cabsaniiru. Garuu biyya isaanii keessatti dubartoota biroo ofi waliin fudhaataa jiruu? Sirni kootaa siyaasa motummaa Hindii fiixee kennu danda'a.
Erga 1993'tti, mandaroota Hindii akka tasaatiin filataman sadi keessatti gahee ittigaafatammaa mana maree dubartiitti jijjiruuf gaafatanii turan.
Qorannoo bara 1012 tti shamarran Hindii humaatamaa fi maatii isaanii irratti gaggeefamee akka adda baafameetti, oggantoota dubartootaa qabaachuun shamarran mandara keessaatiif kaka'umsa olaanaa qabaata.
Ijoollee isaanitiif gama barnootaa, umurii mucaa jalqabaa itti argatanii fi yaada hojii maal akka barbaadan maatuun yoo gaafataman, irra caalaan isaanii ijoollee dhiiraatiif hawwii olaanaa qabu.
Garuu, tokkicha madarri osoo oggantoota dubartootaa marsaa lamaaf qabaannaan garaa garummaan hawwii maatiin ijjoollee dhiiraa fi dubarootaaf qaban %25 ta'eera yoo kanneen gonkumaa oggantuu dubartii hinqabne waliin wal biratti ilaalamu.
Gaheessoota mataa isaanitiif, parsantaa 32 xiqqaate. Akkasumas dhiiroota yoo dubartoonni taayitaarra bahan hinjibineen kaka'umsi dubarootaa haaluma walfakkaatuun xiqqaachaa deemaa jira.
Barreessaan akka jedheettis, dubartoonni oggansa irra jiran haala dubartootaa fi shamarranii gama imaamataatiin geedaru irratti kaayyoo murtaa'a qabu. Garuu akka fakkeenya gaariitti jiraachun isaanii kaka'umsaa fi barnoota shamaraniitiif gahaa ture.
Goodayyaa suuraa Fakkeenyi Hilaarii Kilintaniifi Angeelaa Merleel dubatoonni haasaa dheeraa akka taasisaniif kakaasee jira.
Qorannoon bara 2012 tti Siwiisiin gaggeefame tokkoos, fageenya irraa iyyuu yoo ta'e fakkeenyummaan ilaalcha dubartootaa oggansa irratti jiranii ni kakaasa jedheera.
Barreessan kunis barattoota dhiiraafi dubaraa garee afuriin akka haasaa taasisaniif affeerre. Tokkoon isaanii suraa oggantuu Jarman Angeelaa Merkan gidigiddaa irratti argan. Tokko ammoo Hilaarii Kilintan argan, kan biraa ammoo suuraa Biil Kilintan, gareen to'annaa ammoo suraa omaatu hinagarre.
Dubartoonni yeroo oggantoota siyaasaa dhiiraa waliin taa'an irra, yoo dubartoota waliin jiran caalaa dheeraa hasa'u. Hanguma yeroo dheeraaf dubbataniin ammoo, hojii mataasaanii caalaa haala gaariin safaruu eegalu.
''Walqixummaa galma siyaasa dubartoota qofas osoo hintaane, (akka maddi keenya agarsiisuutti) wantoonni isaan kakaasanilleen haalaan dabalee jira,'' barreessaan gabaasa isaa keessatti xuqe.
Yaada gahee siyaasaa keessatti argamuun dubartootaa walqixxuummaa haala jiruu isaanii kan guyyaa guyyaa keessaatiin walitti hidhama akka qabu ragaan jira.
Foramiin Dinagdee Addunyaa Gabaasa Garaa garummaa Koniiyaa Addunyaa keessatti haaloota mummee afur irratti hundaa'uun biyyootaaf sadarkaa baase. Kunis fayyaafi jiraachuu, sadarkaa barnootaa, hirmaannaa dinagdee fi siyaasaati.
Bara 2016 keessa biyyoonni garaa garummaa korniyaa xiqqaa qabanis- Isilaand, Fiilaand fi Noriweedha. Isaanis biyyoota hirmaannaa dubartootaa siyaasa keessaa qabaniidha. Kunis dubartoonni biyyoota keessatti siyaasaan bakka bufamanitti caalaa akka hojatan mul'isa.